MacOS Sierra 2 beta beta 10.12.1 sidoo kale waa la heli karaa | Waxaan ka socdaa mac
MacOS Sierra 2 beta beta 10.12.1 sidoo kale waa la heli karaa
Shalay waxaan aragnay imaatinka macOS Sierra 10.12.1 sameeysa beta version waxaana si wadajir ah loogu sii daayay nooca isticmaalayaasha gudahood barnaamijka beta ee Apple leedahay. Kuwani noocyada beta isticmaalayaashu aad ayey isugu mid yihiin noocyada soosaarayaasha marka laga hadlayo waxyaabaha beta ka kooban.
MacOS-ka cusub ee loo yaqaan 'macOS Sierra beta 2' shaki la'aan waa nooc la soo marin karo oo khaladaadka noocii hore la hagaajiyay ama la xalliyay, laakiin Apple ma joojin doono inay soo bandhigto betaskan cusub toddobaadyada oo ay aragto waxa ay u muuqato inaysan sugi doonin dheer sii daayo beta soo socda 3.
Sidan oo kale, Apple waxay helaysaa jawaab celin dheeri ah oo ku saabsan nooca beta oo waxay leedahay gees ballaaran oo maneuver ah noocyada soo socda. Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan adeegsadaha ayaa ah inuu awood u yeelan karo ka hor inta badan isticmaaleyaasha wararka lagu rakibay Mac, taas oo ah, xaaladdan hadda kahor waxay ku saabsan tahay noocyada horumarinta iyo warar yar oo muhiim ah oo ku saabsan isticmaalka ayaan heli doonnaa.
Haddii aad ku jirto barnaamijka beta-ka dadweynaha, uma baahnid inaad soo degsato rakibayaasha isla markaana cusbooneysiintu waxay si toos ah uga muuqan doontaa dukaanka barnaamijka Mac-ka, Mac App Store ee ku jira tabka Updates. Haddii, dhinaca kale, aadan wali naftaada ku dhiirrigelin inaad tijaabiso betas-ka Apple oo aad hadda uun iska diiwaangelisay barnaamijka uu Apple u furay dhammaan adeegsadayaasha, marka hore waa inaad kala soo degtaa rakibaadda websaydhka adoo adeegsanaya lambar ah Si toos ah ugu soo fur Mac App Store, taladayduna waa in lagu rakibo nooca beta-ka qayb qayb ka gaar ah nidaamka qalliinka ee aad u isticmaasho maalintaada waligaa ha u isticmaalin beta sida rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » MacOS Sierra 2 beta beta 10.12.1 sidoo kale waa la heli karaa
Soo bandhigida natiijooyinka Apple ee Q4 2016. Ma la socon doonaan qalab cusub?
Bal daawo taxanaha cusub ee Apple Watch Series 2 oo biyaha ka cayrinaya afhayeenka